Ny Malaso sy ny mpanararaotra
2012-09-13 @ 17:33 in Ankapobeny
Somary mbola mamirifiry ny maraina sy ny hariva fa mafanafana ny atoandro. Toa mifanahatahaka amin'izany ihany koa ny toe-draharaha eto Madagasikara. Mafanavay ny zavamisy eto an-toerana, mampangovitra toa tsy ahita-mitsinjo ny vodiandro. Valalanina ny rehetra. Izay namboly izao krizy izao sy ny minia manao izay hitohizany ary ny mahalala ny tanjon'izao finiavana handripaka na handroaka ny olona any amin'ny faritra atsimo ihany sisa no mahafantatra ny tanjony sy ny antony hanaovany izao fomba mamohehatra izao.
Tsara ihany koa ny manamarika, raha ny fomba fijeriko, fa misy ny manararaotra ao anatin'izao krizy izao. Miverina indray ny 26 janoary 2009: tetika nentina nandravana ny hari-pananan-dRavalomanana Marc nanerana an'Antananarivo sy nanerana an'i Madagasikara ny ampitso (27 janoary 2009) no nanaovana ilay diabe mody nolazaina fa hanafaka ireo mpianatra telo nosamborina ka hotsaraina teny Anosy, kanjo hay hamotika ny RNM sy ny TVM vao nanana fitaovana raitra dia raitra sy ny MBS mbamin'ny Magro no tena tanjona. Izay no paika voalohany fa niitatra avy eo noho ny fanararaotana.
Raha todihana manko izay lasa nosoratako izay dia nisy ny tetika hamotika an-dRavalomanana Marc tamin'ny alalan'ny famotehana ny fananany. Niitatra tampoka tamin'ny fandravana ny Jumbo score Ankorondrano sy ny espace Zoom teo akaikiny izany. Tsy tao anatin'ny tetika nomanina fa avy amin'ny mpanararaotra. Lasa ihany koa ny fandrobàna ny Citic Center sy ny Supreme Center mbamin'ireo misy center teny ho eny... Avy amin'ny fanararaotana avokoa izany. Izay no niavian'ilay fomba fiteny hoe "mora ny manomboka ady fa tsy azo vinavinaina ny famaranana azy. Isaky ny vita ny fivoriana tao amin'ny kianjan'ny 13 mey dia miala any indray ilay fanararaotana handroba na hampihorohoro olona. Azo lazaina ho nifarana iny rehefa natao izay nanakanana ny fivoriana teo amin'ny 13 mey.
Tsy voatery ho Olobe no niavian'ilay fanararaotana fa avy amin'ireo hafa mihevitra ny tenany ho madinika sy mba te-haka ny "kely" anjarany. Efa hafahafa raha vao nahare fa an-jatony ireo dahalo nanafika fa tsy ampolony intsony. Efa raikitra ny adihevitra fa tsy asan-dahalo tsotra io fa misy ambadika, ary mety ho fiokoam-bahoaka, saingy mbola vinavina ihany izany. Tsy taitra na mody tsy taitra loatra ny fitondrana fa notohizana tamin'ny fanokanana Lapan'ny Fitsarana iray tany amin'iny faritra iny ny raharaha. Hatreto mifamafohafo ny raharaha ary tsy mbola fantatra ny tena tanjona kinendrin'ny "mpanakorontana".
Niteraka fanararaotana ilay fitarihana ny olona handroba tamin'ny 26 janoary 2009, dia niteraka fanararaotana ihany koa ny fanangonana ho dahalo an-jatony. Ny Malaso dia ireo andiana mpangalatr'omby ary tsy mangalatra afa-tsy omby fa tsy mikitika zavatra hafa ary tsy mamono olona ihany koa na dia mety hahatratra ampolony ihany aza ry zareo no miara-dia. Ny mpanararaotra kosa dia ireo mandroba izay rehetra hitany na omby na vola na entana hafa, mety manakan-dalana ihany koa mandroba ny mpandeha amin'ny fiara fitaterana, mety ho mandoro tanàna na dia ny mpitandro ny filaminana aza no tena malaza amin'ny fandoroana tanàna io. Manararaotra amin'ny alalan'ny fanaovana fanamiana ka tsy ahafantarana intsony izay mpitandro ny filaminana amin'ny mpandroba mba tsy ilazana fa ny mpitandro ny filaminana ihany no mandroba.
Dia eto isika izao, misy ny tetika na tanjona farany tian-kodiavina, fa mety ho tafiditra anatin'ny tetika ihany koa ilay fanararaotana. Manararaotra toy ny banga mihomehy alina ny mpangalatra sy ny vao mianatra mangalatra rehetra satria tsy voafehy intsony ny fitandroana ny filaminana. Tsy misy intsony ny rafitra mahasahy mijoro fa samy matim-bola daholo, tsy mahalala afa-tsy vola... nefa ny fomba tsara indrindra hahazoana vola sy hiaina am-pilaminana dia avy amin'ny fanaovana ny marina sy fiarovana ny marina sy ny rariny mandrakariva. Dia eto isika: saika tsy voafehy na niniana tsy nofehezina ny fandrobana saika isan'andro nandritra ny tolona laoranjy nefa dia Antananarivo ihany no tena nanjakan'izany eo amin'ny sehatry ny sarambambe. Ankehitriny kosa lasa ny faritra no ipoiran'izany tsy fifehezana ny fandriampahalemana izany. Ho sahirana kokoa izay miezaka ny hitandro ny filaminana satria midadasika avy folo na zato heny ny faritra mila fehezina nefa ny olona vonona hitandro ny faritra toa mihavitsy sy tsy marisika "hamono tena" amin"izany.
Tombontsoan'iza ny isian'ny korontana eto Madagasikara? iza no (olona ambony) mahazo vahana rehefa gaboraraka ny fandriampahalemana? Ny famahana ny valin'ireo fanontaniana ireo no ahafahana mahafantatra izay tena ao ambadik'ireo mpamboly ny korontana eto Madagasikara. Eritreritra ny ahy no ilazako fa ao amin'ireo mpifehy ambony ny fitandroana filaminana na fiarovana an'i Madagasikara no misy ny atidoha na ny mpiray tsikombakomba amin'ity raharaha mahamenatra mamotika tanteraka ny maha-firenena an'i Madagasikara ity. Lozako! Lozanao ry mpiray tanindrazana fa avelako sy avelanao ho potika ny firenentsika manoloana ireo tsy mataho-tody mandroba ny harena rehetra eto Madagasikara.
Jentilisa 14 septambra 2012